Nabadoon Yaasiin “Hadii uu dhab idinka yahay mudaharaadku, kuwa hadda u xiran kufsiga ilaa sharciga lagu fuliyo ha harsanina” – Kalfadhi
Duqa KMG ah ee degmada Gaalkacyo isla markaasna ka mid ah nabadoonada gobolka Mudug mudane Yaasiin Cabdisamad ayaa si adag u dhaleecayay in gogol la isugu dhigto isla markaasna hab beeleed lagu xaliyo kiisaska la xiriira kufsiga.
Mar uu maanta hadal ka jeediyay kulan ka dhacay Gaalkacyo oo lagaga hadlayay kiiska dilka iyo kufsiga ahaa ee Caasho Ilyaas oo 12 jir ahayd, ayuu sheegay in marar badan uu ka shaqeeyay kiisas aan xaq ahayn oo ku dhisan xeer beeleed.
“Illaahow markhaati iiga ahaw, raali kama ihi kamana noqonayo, daalimiinta kufsiga u geysanaya gabdhaha inta la sii daayo in inta laba qabiil isaga yimaadaan la yiraahdo aynu ka heshiino.” Ayuu yiri Nabadoon Yaasiin.
Wuxuu ugu baaqay dadka reer Gaalkacyo in ay joogteeyaan mudaharaadka looga soo horjeedo tacadiyada kufsiga ah ee ay bilaabeen ilaa sharciga islaamka lagala tiigsanayo dadka hadda loo hayo falalkaas hadii ay ku caddaadaan. Wuxuu xaqiijiyay in ay jiraan dhalinyaro u xiran kufsi iyo kuwa hadda lagu raadjoogo.
Wuxuu xusay kiis kufsi ah oo bishii hore ka dhacay tuulada Bacaadweyn ee degmada Gaalkacyo kaas oo heshiis beeleed lagu xaliyay falkii iyadoo uu dhibanuhu weli ku jiro cisbitaalka Gaalkacyo.
“kuwa hadda la hayo aynu ku mintidno iyaga sharciga in laga bilaabo.” Ayuu yiri Nabadoon Yaasiin, wuxuuna intaas ku daray “Hadii uu dhab idinka yahay mudaharaadku, kuwa hadda u xir xiran kufsiga kuwaas ilaa sharciga lagu fuliyo ha harsanina”
Baarlamanka Puntland iyo bulshada rayidka ah ayaa shalay ugu baaqay beelaha in aysan ka gar niqin isla markaasna faragelin kiisaska kufsiga ee dhaca, waxayna soo jeediyeen in loo daayo sharciga si dambiilayaasha loogu fuliyo wixii uu sharcigu ka qabo.